पानीमा नून हालेर नुहाउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस् - ज्ञानविज्ञान
शरीरमा भिटामिन बी १२, फोलिक एसिड तथा आइरनले रगतको निर्माण गर्दछ । यी तत्व खानाबाट पाइन्छ । खानपान सही नहुदाँ रगत कम हने गर्छ । नेपालकाे जनसंख्यामा रक्तअल्पताको समस्या देखिनु भनेको खानपान सही नहुनु हो ।
शरीरमा रातो कोशिका अर्थात हेमोग्लोविनको कमीलाई रगतको कमी अर्थात एनिमिया भन्ने गरिन्छ । शरीरका प्रत्येक कोषिकालाई अक्सिजनको कमी हुन्छ र त्यसको पूर्ति गर्ने काम हेमोग्लोविनले गर्छ ।
शरीरमा रगतको कमी विभिन्न कारणले हुने गर्दछ ।
शरीरमा रगतको कमी (एनिमिया) हुनुको कारण ?
विभिन्न कारणले गर्दा शरीरमा रगतको कमी हुने गर्दछ । त्यसमध्ये एनिमिया विभिन्न कारण हुने गर्दछ । खानपानको कमीकै कारण न्युटि्रसनल एनिमिया हुने गर्छ ।
न्युटि्रसनल एनिमिया सबैभन्दा धेरै पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकामा देखिने गर्छ । त्यस्तै, नौ वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरी तथा गर्भवतीमा देखिने गर्छ ।
न्युट्रिसनल एनिमियाको लक्षण
न्युट्रिसनल एनिमियाको विभिन्न लक्षण हुने गर्छ । चक्कर लाग्ने, थकान महसुस हुने, सास फुल्ने, एकाग्रतामा समस्या, अनुहार सेतो देखिने, बच्चाको व्यक्तित्व विकासमा समस्या , तौल तथा उचाई कम हुने , हालखुट्टा झमझमाउने लगायतका समस्या हुने गर्छ ।
त्यस्तै, गर्भवती महिलाबाट जन्मने शिशु कम तौलको बच्चा जन्मने समस्या हुन्छ ।
शरीरमा रगतको कमी (रक्तअल्पत्रा) भएमा ?
शरीरमा रगतको कमी भएमा हातखुट्टा झमझमाउने, चक्कर लाग्ने, थकान महसुस हुने, एकाग्रता नहुने, अनुहार सेतो हुने, तौल अनुसारको बच्चाको व्यक्तित्व विकास नहुने गर्दछ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत मानिस रक्तअल्पत्राबाट ग्रसित छ ।
रक्तअल्पत्रा भएको कसरी थाहा पाउने ?
मानिसलाई रक्तअल्पत्रा भए, नभएको विभिन्न तरीकाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यदी कसैलाई माथि उल्लेखित लक्षण देखिएमा
१. कम्पिलिट व्लड काउन्ट तथा पिसिभी जाँच गर्दा हेमोग्लोविनको मात्रा कम भएमा
२. हेमोग्लोविन कम भएमा
३. मायक्रोस्कोपिक जाँचद्धारा पनि हेमोग्लोविन कम भएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
के छ उपचार विधी
यदी कसैलाई रक्तअल्पत्रा भएमा आइरन, फोलिक एसिड तथा भिटामिन बी १२ दिइने गरिन्छ । त्यस्तै, हरियो सागसब्जी, लौका, घिरौला, रातो मासु लगायतका आइरनयुक्त खानेकुरा खाने सल्लाह दिइन्छ । त्यस्तै, फलफूल पनि आइरनको मुख्य स्रोत भएका कारण अत्याधिक मात्रामा फलफूल खाने सल्लाह दिइन्छ ।
त्यसबाहेक, अत्याधिक मात्रामा चियाको सेवनले पनि रगतमा आइरनको कमी गर्ने हुँदाँ चिकित्सकहरु सकेसम्म चियाको सेवन नगर्न अनुरोध गरिन्छ ।
त्यस्तै, रक्तअल्पत्रा भएमा जुकाको संक्रमण हुनसक्छ । जुकाले रगत खाने हुदाँ रक्तअल्पत्रा भएका मानिसलाई सबैभन्दा पहिले जुकाको औषधी दिइने गरिन्छ , जुन तीन महिनासम्म खानुपर्छ । यसले शरीरमा रगतलाई पुनः सुचारु गराउँछ । साथै फोलिक एसिड , आइरसन तथा भिटामिन बी १द्द दिने गरिन्छ ।
रक्तअल्पता भएका गर्भवती महिलाहरुलाई सरकारद्धारा आइरन चक्की तथा फोलिक एसिड उपलब्ध गराउने गरिन्छ । जबकी किशोरकिशोरी तथा पाच वर्ष मुनी बालबालिकाहरुको लागि भने सरकारको कुनै निति छैन । त्यसको लागि सरकारले कुनै सप्लिमेन्टको व्यवस्था गरेको छैन ।
जबकी दक्षिण पूर्वी एसिण (साउथ इष्ट एसिया) मा भने यो राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ । विदेशमा भने उत्पादनको समयमै खाद्यान्नहरुमा आइरनको मात्रा बढाइने गरिन्छ । फुड फोर्टीफिकेशन गरिन्छ । जसका कारण ती मुलुकका जनताहरुले भरपूर मात्रामा आइरन पाउने गर्छन् ।
तर नेपालमा गर्भवती महिलालाई बाहेक अन्य वर्गका मानिसहरुको लागि यस्ता कार्यक्रम नहुदाँ नेपालमा हरेक सय जनामध्य ६० जनालाई रक्त अल्पत्रा हुने गर्छ ।
त्यसो त आइरन बाहकेे फोलिक एसिड तथा भिटामिन बी १२ को कमीले पनि शरीरमा रक्तअल्पत्रा गराउँछ ।
(भक्तपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा कल्सल्टेनट हेमाटोलोजिस्ट तथा बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टका रुपमा कार्यरत डा. अजय झासित गरिएको कुराकानीमा आधारित )
कहिले काहीँ हामीलाई थकाई लाग्छ । सास फेर्न अलि गाह्रो भएजस्तै हुन्छ । सास बढ्छ । यस्तो समस्या बेलाबखत हुनसक्छ, जो सामान्य हो ।
सुदुरपश्चिमका कतिपय गाउँमा अझै पनि गर्भवती महिलालाई धेरै खाना दिनुहँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई हरियो सातपात, फलफूल, मासु, दूध आदि त्यति धेरै दिदैनन् । कस्तो भने केरा खाए बच्चा पाठेघरमा टाँसिन्छ, दूध-दही खाए गाईभैंसीको दूध सुक्छ भन्ने जस्ता अन्धविश्वास छन् । जसले गर्दा गर्भवती महिलामा कुपोषण र रक्तअल्पताको समस्या हुने गर्छ ।
कणर्णालीमा फल्ने जुनेलो, कोदो, फापर, आलु र अछाममा फल्ने गहुँ र कोदोको प्रयोग गर्दा कुपोषण र रक्तअल्पता हुनबाट बच्न सकिन्छ । जसबाट पाइन्छ फलाम तत्व
Don't Miss it राजमा खादाका फाइदा जानेर तपाइ चकित पर्नुहुनेछ
Up Next के तपाई दिर्घाउ रहन चाहनुहुन्छ ? दिर्घायु रहन यस्ता खानेकुरा खान एकदमै जरुरी छ
पानीको बारेमा केहि रोचक तथ्य
१. तातो पानी चिसोभन्दा चाँडो जम्छ । २. मानिसले एक वर्षमा १ हजार लिटर पानी पिउन सक्छ । ३. मानिसको मष्तिष्कमा…